Ku hagaaji faaiidadaada istiraatiijiyadda faaiido leh ee vfxAlert | vfxAlert official blog
GBP - hal dhibic iyo ikhtiyaar faaiido leh vfxAlert
Ganacsatada Hello! Maxay tahay sababta calaamadaha ikhtiyaariyada ikhtiyaari ikhtiyaari ikhtiyaari ah ay uga faa'iido badan yihiin ganacsiga "qadiimiga ah" ee lacagaha iyo suuqyada saamiyada? Xaqiiqda ah in xitaa hal dhibic oo ka sarreeya ama ka hooseeya qiimaha furitaanka ay xireyso ganacsiga faa'iidada. Aan aragno sida loogu sameeyo lacagta Ingiriiska.
Bollinger Bands (BB) - jihada toosan ee khadadka BB wuxuu xaqiijinayaa jiritaanka guri, burburka khadadka ayaa noqon doona calaamadda binary ee dhammaadkeeda. Haddii baaxaddu ballaadhan tahay, waad furi kartaa xulashooyin aad dib uga laaban karto xuduudaha. Habkani waxaa lagula talinayaa oo kaliya ganacsatada qibrada leh!
Faa'iidada ugu weyn ee Bollinger Bands oo ah tilmaame kanaal ayaa ah calaamadaha hormuudka u ah isbeddelka xaaladda suuqa (uruurinta, qeybinta, joojinta) iyo xaqiijinta runta ama been abuurka burburka maxalliga ah ee heerarka taageerada / iska caabinta muhiimka ah.
Stochastic - oscillator wuxuu qiimeyn doonaa isku dheelitirka hadda u dhexeeya iibsadayaasha iyo iibiyeyaasha: saadaashu waxay ka sarreysaa heerka 80 - dhammaadka kor u kaca (xad dhaafka ah), ka hooseeya 20 - dhammaadka hoos u dhaca (oversold).
Mar labaad, waxaan ku xusuusineynaa in xulashooyinka la furay markii isbeddelka hadda socda uu ku dhammaado iyadoo la xaqiijiyay sicir barar.
Ikhtiyaar u kac (WAC). Qiimuhu wuxuu ka soo noqonayaa xadka hoose ama khadka dhexe ee kooxaha Bollinger, hufnaanta ayaa ka sarreysa heerka eber ama aag aad u sarreeya.
FALL (PUT) option. Xaaladaha iska soo horjeedda: dib uga laabashada xadka kore ama khadka dhexe ee Bollinger Bands, stochastic wuxuu ka hooseeyaa eber ama waa la iibsaday
Fur ganacsi shumaca xiga ka dib calaamadaha binary. Waqtiga uu dhacayo ikhtiyaariyada waa inuu ka yaraan 5-7 daqiiqo xitaa haddii waqti shaqeed ahaan loo doorto daqiiqad, sida fiidiyowgeena.
Xitaa waqtiga daqiiqadaha, Stochastic marar dhif ah ayey aagag aad u weyn gasho waxaadna tabi kartaa heshiisyo badan oo wanaagsan. Haddii qiimaha iyo Stochastic ay bilaabaan inay u dhaqaaqaan hal jiho - waad furi kartaa ikhtiyaar!
'Cidhiidhiga' kanaalka qiimaha Bollinger Bands, ayaa aad ugu sarreeya suurtagalnimada dhaqdhaqaaq xoog leh ka dib dhammaystir buuxa. Xaaladda ka soo horjeedda ayaa lagama maarmaan u ah ganacsiga cirifka xuduudaha: marinku waa inuu ahaadaa ugu yaraan 30-40 dhibcood, haddii kale, ikhtiyaarrada ayaa noqon doona mid aan faa'iido lahayn, xitaa haddii calaamadaha binary ee bilaashka ah ay muujinayaan jihada saxda ah;
Haddii dallaalku uu suurtogal ka dhigo in la xiro ikhtiyaarka ka hor inta uusan dhicin, waan sameynaa (xitaa haddii faa'iido tahay!) Marka ay soo ifbaxdo calaamadda ka soo horjeedda
Aan soo koobno . Istaraatiijiyaddu waxay u taagan tahay nidaam lagu kalsoonaan karo oo ah muxaafid xagjir ah oo loogu talagalay ganacsiga suuqa xasilloon. Halbeegyada qalabka ganacsiga waa la beddeli karaa iyadoo loo eegayo isbeddelka hadda jira. Mar labaad, waxaan ku xusuusineynaa calaamadaha ikhtiyaar ikhtiyaari ikhtiyaari ah ee ugu faa'iido badan ay ku jiri doonaan oo keliya meelaha isbeddelka, inta lagu jiro xilliyada fidsan ee aan ka maqanahay suuqa!